Blog-ka DesdeLinux wuxuu ka tagayaa Hostgator wuxuuna aadayaa GnuTransfer | Laga soo bilaabo Linux
Qiyaastii usbuuc ka hor waanu ka faallaynay in aan tijaabinay VPS ee GnuTransfer. Hagaag, sidaad ogaatay, horumarku waa mid cajiib ah, tan iyo markii aan u guurnay VPS, ka baaraandegista barta dhexdeeda shaki la’aan way ka dhakhso badan tahay sidii hore, marka lagu daro xaqiiqda habaarnaa Khalad dhib leh: «Khalad 500 Server Gudaha ah«.
Qoraal kale Waxaan u sheegay dhammaan faahfaahinta aan haynay labadan sano martigelinta (kii ugu dambeeyay ee Hostgator), maaddaama ay had iyo jeer akhrin karaan sababo jira awgood aan dhibaatooyin la kulannay laakiin aan intaas ka badnayn. Shirkado badan oo sumcad leh ama bogag ayaa doorta inay iibsadaan Server khaas ah oo loogu talagalay waxqabadka ugu wanaagsan.
Xilligan la socdo qorshaha VPS (server Virtual) xen-04096 en GnuTransfer Waxaan u qaadaneynaa aasaaska koritaanka aan kala go ’lahayn, aasaaska adag ee aan ku dhisi karno bulsho xitaa ka ballaaran, adeegyo badan, tayo badan leh
1 Macluumaadka cusub ee server:
2 Taageerada Farsamada ee GnuTransfer:
3 Yey yihiin ?:
5 Soo koobid:
Macluumaadka cusub ee server:
Adeeggu wuxuu ka kooban yahay 2 processor, 3GB RAM iyo 80GB oo HDD ah oo Raid10 ah. Waxaa lagu maamuli karaa iyada oo loo marayo guddi loo yaqaan Xakamaynta VPS.
Kuwa aan ogayn, markaad ka iibsanayso VPS iyada oo loo marayo guddi maamulkeeda guud waxaad ku caddayn kartaa nooca aad rabto inaad rakibto, ragga ku jira GnuTransfer waxay bixiyaan dhowr: Fedora, Debian, CentOS, Ubuntu, openSUSE iyo Slackware; VPS-keena waxaan ku rakibnaa Debian (Wheezy, 64bits).
Waxay sidoo kale bixiyaan ikhtiyaarro kale oo ugu yaraan aanan waligey arag, tusaale ahaan waxay u oggolaanayaan inay doortaan nooca kala-soocidda loo isticmaalo (ext3, ext4 ama raiserfs), ugu yaraan weligay ma arag in tan lagu qeexi karo bixiyeyaasha kale, sidoo kale sidoo kale (oo kani waa ka sii xiiso badan yahay), waxay u oggolaanayaan inay kala qaybsamaan HDD-ga. Tusaale ahaan, waxaan u kala qaybin karnaa HDD gudaha /… / guriga… / var… iwm, sida haddii ay ahaan lahayd kombuyuutarkeena.
Marka adeegaha la rakibo, waxaan kaliya ku qasbaneyn inaan rakibno adeeg martigelin ah oo aan tijaabino sida ugu fiican ee blogku u shaqeynayo, tan waxaan doorbideynaa inaan adeegsanno Nginx oo aan u adeegsan Apache maxaa yeelay inkasta oo kan dambe uu yahay hoggaamiye suuqa, Nginx wuxuu noo shaqeeyaa waxyaabo yaab leh ka sarreeya dhammaantood waxay cunaan qalab aad u yar. Waxaan sidoo kale rakibnay MySQL, PHP iyo APC si aan u hagaajino ka shaqeynta PHP, waxaas oo dhan waxay si cad u baahan yihiin qaabeyn si loo wanaajiyo dhammaan adeegyada, si aysan u lumin ilaha qalabka.
Taageerada Farsamada ee GnuTransfer:
Waa wiilal ku hadla Isbaanishka, taasi waa, taageerada farsamada ee Isbaanishka . Markaa haddii midkiinna uusan aqoon u lahayn Ingiriisiga, tani macno malahan, uma baahnid caawimaad Google Translator si aad uga hesho caawimaad sida bixiyeyaasha kale
Siyaabaha loo codsado caawimaad farsamo Waxaa jira dhowr, hase yeeshe ilaa iyo hadda wax dhibaato ah igama qabin gabi ahaanba wax aan ku jirin VPS sidaa darteed wali ma aanan helin marino waxtar leh oo ku saabsan taageerada farsamada LOL!
Yey yihiin ?:
GnuTransfer waa shirkad sida aan ka fahmay Argentina, ragga ka tirsan bulshadayada caalamiga ah ee GNU / Linux (magaceeda ayaa tilmaamaya, GNU Wareejin).
Adeegyaasheeda waxay ku yaalliin a Xarunta xogta Atlanta, USA, halkaas oo nabadgelyadu ay aad u khatar badan tahay, iyo sidoo kale xasilloonida. Cadawga ugu weyn ee xarun xogeed waa bixinta korantada, maadaama ay yihiin macaamiil sare oo koronto iyo dhacdada ugu yar ama ku fashilantay, kumanaan server iyo malaayiin goobood ayaa laga yaabaa inay ka baxaan khadka, sidaa darteed waxay leeyihiin fikrad ah sida halista ah Maaddaama ay tahay xaruntan xog-ururineed, waxaa ku shaqeeya tamar koronto oo laga helo isla bedello quudiya Bangiga Dhexe ee Federaalka.
Illaa iyo hadda waxaan la xiriiray Javier oo keliya, daaweynta ugu wanaagsan ee uu i siiyay, haddii aan awoodo, waxaan ku casuumi lahaa biir waxaanan u iibin lahaa keeg
Waa ansax in la caddeeyo in ragga ku jira GnuTransfer ay yihiin nidaam ama maamuleyaal maamule xirfad ahaan. Kuwa aan fahmin waxa ay tani ku saabsan yihiin, kuwa naga mid ah ee u heellan maaraynta server-yada waxay dareemayaan kalgacal gaar ah mid kasta oo iyaga ka mid ah, mid kasta oo ka mid ah serverka ay rakibtay oo ay qaabeeyeen kuwa inaga u heellan waxay u taagan tahay wax muhiim noo ah sidaa awgeed rarka iyo xumaanta waxqabadka qaar ka mid ah server-ka GnuTransfer ayaan ikhtiyaar u ahayn iyaga, uma maleynayaan sidaas.
Internetka waxaad ka heli kartaa bixiyeyaasha VPS iyo martigelinta qiimaha u muuqda hadiyado, in ka yar $ 1 bishii martigelin ... $ 5 bishii VPS, cajiib ah iyo xitaa qumman, sax?
Khiyaanadu waxay tahay in kuwa alaab-qeybiyeyaasha ah ee qiimaha jaban ee macquulka ahi ay yihiin kuwo tayo xun, daqiiqad ka fikir: iyadoo qiimaha noocan oo kale ah oo raqiis ah wax yarna lagu iibinayo, waa maxay tayada qalabka aad runtii iibsan karto? Taasi waa sababta ay bixiyeyaashan noo dhow ay noo siinayaan VPS ama Hosting ay ka fog yihiin malaa'ig, doorashada ugu xun ee aan sameyn karno.
Sidoo kale lacag kuma lumin karno, maadaama aysan ahayn wax dabiici ahaan ugu baxa geedaha. Tusaale ahaan, VPS-ka ku jira Hostgator oo leh 3GB RAM iyo 165GB oo HDD ah wuxuu leeyahay qiime sanadkiiba ah $ 1760, halka GnuTransfer VPS leh 6GB RAM (labanlaab kii hore) iyo 160GB oo HDD ah $ 1400 sanadkii. Farqiga ka badan 300 $, inkasta oo tan GnuTransfer ay leedahay labalaab RAM. Waxaan ula jeedaa waa in lacagta aan la khasaarin karin ama la khasaarin karin.
GnuTransfer qiimaha ay haystaan ​​ma ahan kuwa ugu jaban adduunka, waxaa jiri doona bixiyeyaal iyaga siiya qalab dheeri ah oo lacag yar laakiin, sida kor ku xusan waxaan wax yar idiinka idhi tan, waa muhiim inaad marwalba haysato isu dheelitirka tayada iyo qiimaha.
Iyada oo leh GnuTransfer waxaan ku haysan doonnaa baloogga a server u gaar ah, Ma isticmaali doonno SharedHosting sidaa darteed waxqabadka ayaa ka fiicnaan doona.
Sus qiimaha lama buunbuuniyo ka fog, VPS oo leh 2GB RAM iyo 40GB oo HDD ah waxay ku kacaysaa $ 300 sanadkii, marka la barbar dhigo bixiyeyaasha kale runti ma dareemo qiimo sare.
Waxay leeyihiin a taageerada farsamada ee Isbaanishka, taasoo wax badan uga fududeyn lahayd dadka aan ku hadlin Ingiriisiga.
GnuTransfer maahan shirkad hami leh oo la mid ah Microsoft ama Apple, waa niman iyagu wadaag jacaylkeena Linux iyo Software Bilaash ah guud ahaan, xaqiiqda sidaan horay u sheegay, waxay sii daayeen bedel ka mid ah CPanel oo ay iskood u qorsheeyeen iyagoo adeegsanaya 100% qalab bilaash ah
Marka ... ka dib markaad tan ogaatid, maxaad u siin weyday isku day oo aad u kireysatid VPS ama Marti geliso iyaga?
In DesdeLinux waxaan go'aansanay inaan ku kalsoonaano taraafikada iyo waxqabadka barta 'VPS' iyaga iyo, illaa iyo hadda waxaan sameyneynaa wax weyn
Sikastaba asxaabteyda, waxaan u maleynayaa in maqaalkan aan si faahfaahsan ugu sharxayo sababta looga badalayo Hostgator GnuTransfer, Shaki ama su'aal kasta, fikrad, cabasho ama soojeedin nala soo socodsii, waxaan halkaan u joognaa in aad na caawiso ^ - ^
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Laga soo bilaabo Linux » Blog-ka DesdeLinux wuxuu ka tagayaa Hostgator wuxuuna aadayaa GnuTransfer
Runtu waxay tahay inaad ogaatid xawaaraha.
Waan ka xumahay in aysan bixin marti-gelin qallalan haddii ay dhacdo maalin maalmaha ka mid ah waxaan u baahanahay in aan sameeyo degel websaydh ah, in kasta oo 1 & 1 ay wax weyn noo socdeen, laakiin maadaama aan booqashooyin yar lahayn, ma aanan la kulmin dhibaatooyinkiinna
Hadaad ula jeedo martigelinta la wadaago, waxay leeyihiin: http://gnutransfer.com/web-hosting/
Markaad ka hadasho $ 300 sanadkii, waa maxay lacagta aad ula jeeddo?
Haa haa, mahadsanid 🙂
Runtu waxay tahay in farqiga xawaaraha uu yahay mid naxariis darro ah, ka hor intaanay noqon mid aan la raadin karin. Waxaan kuugu hambalyeynayaa isbedelka 😉
Iyo inaan tagno in kabadan 26 kun booqasho maalintii ... runta ayaa ah inaan sifiican u aqaan bangiga! 🙂
Oo RAM-ka VPS-ka wali kama badna 390MB oo la cunay ... ugu sarreeyay wuxuu ahaa 382MB, laakiin caadi ahaan wuxuu ka hooseeyaa 370MB ... maalin kasta waxqabadka ayaa aniga iga sii yaab badan 🙂
Kaalay! Saddex farxad sysadmin aad u fiican oo ka timid FromLinux, KZKG ^ Gaara… HAHAHAHA!
26 kun booqasho maalintii? !!! wau i cajab galiyay Wareejinta Gnu way ka raqiisan tahay martigelinta dalkayga iyo balooggan sidoo kale si dhakhso leh ayuu u socdaa. Boggaygu wuxuu yeelan doonaa ugu badnaan 5000 kun oo booqasho maalin kasta sidaa darteed waa inuu ku fiicnaadaa wareejinta Gnu. Waan go aansaday! Gnu wareejinta ikhtiyaarka ugu fiican
Nabad Fer! Runtu waxay tahay in maqaalka mar hore duugoobay. Maanta waxaan ku dhow nahay 45-50 kun oo booqasho maalintii.
Wau waan kugu hambalyeynayaa! Oo weli la Xen VPS 4GB?
Waxay igu dhacaysaa inaadan u wareegin MariaDB. Xiisaha darteed, ma noo sheegi kartaa sababta aad u haysatid MySQL? Waa taas oo aan leeyahay Oracle xun 🙂
Waxaan doorbiday inaan sii wado MySQL-ka hada. Dhibaatadu waxay tahay inay jiraan isbeddelo badan oo fara badan oo socda:
- Dhamaystir faahfaahinta mawduuca.
- U wac tafatirayaasha.
- Kala saar dhowr darsin qoraal qayb kale.
- Ku rakib, habeyn oo ku habboon VPS cusub baloogga.
- Si joogto ah ula soco VPS si aad u aragto waxqabadkeeda.
- Ku rakib, habeyn oo habee VPS kale.
- Madal wareejinta, dhajinta, IRC, MailServer, FTP iyo adeegyo dheeraad ah oo ku saabsan VPS-ta cusub.
Uff, waxaa jira waxyaabo badan oo laga taxadarayo (oo maadaama 4-taan dambe ay gebi ahaanba tayda yihiin), waxaan doorbiday inaan kusii socdo MySQL maxaa yeelay markaa u haajirida MariaDB waxay noqon laheyd hawl kale, qaabeyn, la socoshada howlaheeda ... xilligan mar horeba shaqo badan ku hayso StandBy 😉
Haa, anigu ma ahi taageere Oracle way
Oday sidaad u sheegi karto inaan jaahil ka ahay mowduuca, waad igala hadlaysaa arintaas waxa aan kuu sheegi karaana waa tarzan-kaaga haramcadka, hehe. Dhab ahaan, iyo goorma ayaad bixinaysaa adeegga mar labaad?
Waxaan kaliya bixinay adeegeyaasha, waa inaan markale ku bixinaa 12 bilood gudahood (maadaama aan bixinay sanad dhan).
Oo ha walwalin, kulligeen waxbaan ka og nahay 😉
Sidoo kale boodboodka MariaDB waa in la sameeyaa goor dhow ama goor dambe.
nasiib wacan waxkasta oo ay tahay inaad sameyso ^^
PS: Oracle way fiicantahay, markaad haysato lacag aad kubixiso 😉
Haa, dabcan, waan ka warqabaa inay tahay inaan sida ugu dhaqsaha badan ugu bedelno MariaDB halkii ugu dambaysay, kaliya in xilligan la joogo ay iigu dhowdahay aniga aniga.
Qof ayaa aad ugu faraxsan isbedelka Hosting…. I xD
Isbedelka runti waa la ogaan karaa, gaar ahaan kuweena aan xiriir la lahayn sida ugu dhakhsaha badan sida ay tahay annaga reer Cuba oo booqda Blog-ka. Waxaan kuugu hambalyeynayaa fikradda ah inaad u wareegto GNU / Transfer
hahaha haa, runtu waxay tahay in horumarku muuqdo, hadda waxaan ku dhex mari karaa goobta si raaxo leh, ka hor intaanay u dhowdahay wax aan macquul ahayn.
Waad ogtahay ... had iyo jeer raadinaya inaad horumariso 😉
Haa, isbeddelka xawaaraha waa mid cajiib ah ...
Isbadal weyn oo aad sameysay. Raadinta ayaa runtii wax badan soo hagaagtay.
Su'aashaydu hadda waxay tahay haddii ay suurtogal kuu tahay inaad daabacdo qoraal aad ku caddaynayso xoogaa qaabeynta / hagaajinta aad codsatay / isticmaashay si aad uhesho xawaaraha hadda jira ee webka, maxaa yeelay ma uusan ahaan lahayn kaliya qalabka, ama haddii
PS, halkaa ka sii wad, waan jeclahay baloogga, maqaalkuna aad ayuu u xiiso badan yahay 😀
Ku jawaab Kevin Maschke
Haddii aadan ka walwalin, waxaan soo dhigi doonaa dhowr qoraal oo aan ku sharixi doono sida aan u qaabeeyey serverka iyo adeegyadiisa si hagitaanku u fududaado, Nginx ... cache, iwm 🙂
In kasta oo aan caddeeyo, qalabka hadda jira durba wuxuu sameeyaa qaybta weyn, aniga iyo wax kasta oo aan ku fiicnaaday wixii aan sameeyay ayaa ka dhigay hagista xitaa mid ka dhaqso badan sidii ay ahaan lahayd, marka lagu daro balooggu wuxuu cunaa RAM aad uga yar 🙂
Waad ku mahadsantahay markale faallooyinkaaga, salaan 😀
Gaara, fadlan: ha ilaawin inaad sameyso walxahaas aad ka hadlayso. Waxaan aad u jeclaan lahaa inaan barto sida loo sameeyo Linux VPS si loo rakibo WordPress. Mahadsanid iyo bogaadin ku saabsan hagaajinta barta.
Waxaan isku dayi doonaa inaan si tartiib tartiib ah u dhigo, wali waxaan hayaa shaqo badan oo aan qabto iyo qoraalo kale oo aan qoro.
Isbeddelku wuxuu ahaa mid aad u fiican, mar hore ayaan ku caajisay qaladka 500 waqti ka waqti laakiin hadda ... farqi weyn. Waan ku faraxsanahay inaan arko in <"DL ay sifiican u koreyso. Hambalyo !!!!
Waxaan u maleynayaa in elav uu aad ugu dhawaaday inuu ina wada dilo 500 qalad… haha! Nasiib wanaag waxaan la kulanay nimankii ka yimid wareejinta GNU.
Oo waxaan doonayay inaan dilo isaga sidaa u beddel-u beddel mawduuca barta hahahaha. Ma jiraan wax culus oo dambe, qaladkii xumaa ee 500 ee ina wada saameeyay, markasta oo aan baxayo waxaan galayaa cadho 🙂
Nacasnimadu waxay igu kaliftay waalli, dhab ahaantii taasi waxay ahayd sababta keentay inuu jiro xilli aan ku sigtay inaan maqnaado, kaliya markaan ka fekerayay dhamaadka ayaa i siiyay caajisnimo aad u weyn.
Ku jawaab àê
Waa maxay awoodda CPU ee VPS? Kuma muujinayaan websaydhka Gnutransfer. Halkan waxaad ku leedahay waxay leedahay 2 CPU. Tusaale ahaan, waxaan joogaa heerka 'Porongator Level 3' oo leh xaddiga 1ghz ee processor-ka iyo 768mb oo RAM ah, way gurguurataa ... waxayna ku kacdaa $ 40 bishiiba.
Su’aal kale. Sidee ku saabsan guddiga? Ma waxay u egtahay plesk ama cpanel?
Waa tan wax soo saarka lscpu:
Ka jawaab su'aashaada maya? 😉
Barbariyiin. Farqi badan ayaa jira. Oo sidee ku saabsan guddiga marka loo eego opcoines iyo walxaha?
Ah waan ilaaway, oo ku saabsan Gudiga martigelinta, Google ee GNUPanel, waxaad ka heli doontaa goobo badan oo ka hadlaya guddigaas. Haddii ay tahay inaan kuu sheego midka aniga ila muuqda, waxaan dhihi lahaa CPanel.
Si kale haddii loo dhigo, gabagabada (iyo in laga fogaado ismaandhaafka), markaad ka iibsaneyso VPS iyaga, ugu yaraan annaga GNUPanel kuma imaanin rakibitaan ahaan (laakiin waa la rakibi karaa). Taasi waa, waa arrin ku rakibida VPS-ga iyo voila, waxaad sidoo kale weydiisan kartaa caawimaad / taageero iyaga ugu dambeyntii, iyagu waa kuwa na iibiya serverka sidoo kale nasiib wanaag iyagu waa kuwa horumariya GNUPanel 😀
John Paul Silva dijo
Waan aqrinayay iyaga muddo dheer isbadalka si weyn ayaa loogu riyaaqay.
Hal su'aal keliya: maxaad u dooran weyday zpanelcp?
Waxaan hayaa mid ka mid ah kuwa raqiiska ah (aamusnaan, kaliya imtixaan) oo aniga si fiican ayey iigu shaqeyneysaa!
Haddii aad rabto inaad tijaabiso, waan ku caawin karaa
Jawaab Juan Pablo Silva
Ragga ku sugnaa GnuTransfer siyaabo kala duwan ayey nooga caawiyeen, habdhaqankooda nagu aaddan wax aan ka fiicnayn ayaa ka yaraa. Intaas waxaa sii dheer, waa xubno ka tirsan isla bulshada Isbaanishka ee ku hadla Linux 🙂
Ma dhahayo hal bixiye ayaa ka fiican kan kale, waxaan kaliya sheegayaa in adeegga GnuTransfer uu si weyn nooga shaqeynayo dareenkooduna uu yahay mid cajiib ah.
Zpanelcp waa guddi ma ahan bixiye !!
Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay way sii xoogaysanaysaa inay noqoto tartanka xorta ah ee loo yaqaan 'cpanel'.
Waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso, ugu yaraan in lagu wargaliyo xulashooyinka guddiga si loo rakibo.
zVPS waa adeegga ay sameeyeen abuureyaasha zPanel. Waxay ka timid Boqortooyada Midowday (UK), marka uma maleynayo inaad iska caabin karto isku daygeeda (haddii aad heysato wado aad ku bixin karto sterling dabcan).
Hambalyo, tan ayaa dhab ahaan u socon doonta waddo dheer.
laga bilaabo Linux Rock!
Shaqo wacan! sug qoraalkan maalmo 🙂
Waxaan hayaa mashruuc aan fuliyo, waxaanan arkayaa teknoolojiyad hufan sida nginx versus apache.
Waxaan qorsheynayaa inaan dhiso server guriga (i3 3220, 2gb ram, 120gb SSD) ugu yaraan inaan bilaabo ...
Symfony, Node.js (ogeysiisyada), mongoDB oo leh teknolojiyadda gridFs, iyo waxyaabo aan nadiifinayo, laakiin mahadsanid qoraalkan, waan hubin karaa in qalabka aan haysto, ugu yaraan aan awoodi doono inaan wax ka qabto taraafikada yar, haha
Waad ku mahadsan tahay kooxda ka socota Linux / usemoslinux!
Ku jawaab brunocascio
Sheygaas yari waa in sidoo kale la arkaa .. hahaha, waxaan haystaa oo kaliya Fibertel 3MB (soo dejiso) 1MB soo rar ...
maxaa diidaya inay u adeegsadaan Python gadaal-en halkii php ??
(waan ka xumahay faallooyinka meesha laga saaray)
Sababtoo ah markaa waxaan ku qasbanaan doonnaa inaan dib u eegno ku dhowaad dhammaan bogga, waxaan joojin doonnaa isticmaalka WordPress si aad u isticmaasho mid kale (Mezaninne, ama barnaamij wax la leh Django), hadda ma tixgelinayno inaan ka tagno WordPress 🙂
Hagaag, hambalyo 😀
Aad u fiican boostada. Baryahan waan ku aqrinayaa. Salaan ka timid Venezuela.
Hehehe waa inuu dhigaa cinwaanka, Sponsored Post, waxaa horeyba u jiray 3 galitaan oo leh mawduucan.
Waxaan kireystay vps leh DigitalOcean.com $ 5 US bishii, sifiican ayey iigu fiicneyd aniga in kastoo aan u maleynayo inay aheyd maxaa yeelay ma aanan helin booqashooyin badan (celceliskeyga maalinlaha ah wuxuu ahaa 50 xD), laakiin waxaan qaabeynayaa vps leh kaliya muuqaalka OS way adagtahay.
HostGator.com Naxdin leh.
iPage.com Naxdin leh.
Aniga ahaan, kuwaas oo kaliya blog u adeegsada hiwaayad ahaan iyo si aan caadi ahayn, waxay umuuqataa mid aad qaali u ah bixinta wax kabadan $ 5 bishii, domain badan iyo kuwa kale.
Waxaan dib u eegi doonaa qorshayaashooda martigelinta, inta badan shirkadaha u heellan bixinta web hosting waa tuugo (waxaa jira waxyaabo ka reeban)
Maahan qoraal la kafaala qaaday, laakiin waxaad xor u tahay inaad ka fikirto waxaad rabto 😉
Waxaan hadda haysannaa in ka badan 26.000 booqasho maalintii ... haa haa, sidaad u aqriso, lix iyo labaatan kun oo booqasho maalin kasta, helitaanka marti-gelinta taageerta tani macno ahaan macquul maaha, sidoo kale waa inaan ka taxaddarno VPS iyo / ama adeeg bixiyaha aan iibsano, waqtiga dhimista ayaa had iyo jeer ah qodob tixgelin la siinayo.
Arintaada sifiican ayaan kuu fahmay, kugula talin maayo inaad iibsato VPS hadaad u qoreyso uun hiwaayad ama wax la mid ah, waxay noqoneysaa inaad lacagtaada lumiso 😉
Salaan iyo mahadsanid akhriskaaga
Eeg waxaan qiyaasayaa, sidoo kale ka qaadashada kaydinta server-ka waa inuu noqdaa madax xanuun ...
Waa inaad ku soo gashaa mowduucan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado fikirka khubarada ee ku saabsan mowduucan 😉
Maxaa laga raadsadaa martigelinta?
Waa maxay adeegyada la adeegsanayo?
Sida loo wanaajiyo webka iyo serverka….
Hambalyo badan asxaabta! Waxa ugu badan ee dareenkeygu soo jiitayna waxay ahaayeen inay yihiin dad ku lug leh adduunka GNU / Linux, waa wax aad u fiican! dhab ahaantii waxaan u isticmaali lahaa mariaDB mashaariicdayda mustaqbalka ee kuleejka (markaan ciyaarayo) waxaanan la yaabay haddii ay isku mid tahay, ma jiraan wax isbeddel ah oo dhaafsiisan waxyaabaha yar yar, sax? maxaa yeelay arrimaha shabakadaha, server-yada iyo keydadka macluumaadka waxaan ahay hahaha dhagax, gaar ahaan keydka macluumaadka, weligey kuma guuleysan inaan sameeyo hal shaqo fasallada dugsigeyga, marwalba waxaan ka codsan jiray saaxiibbaday inay u sameeyaan XD
Waxay leedahay, inkasta oo ay u muuqdaan kuwo yaryar, isbeddello waaweyn marka la barbar dhigo MySql .. Gaar ahaan mashiinnadeeda cusub ee 2 ee lagu beddelayo InnoDB iyo MylSAM.
Dhowr maalmood ka hor waxay daabaceen maqaal ku saabsan:
Aad baad u mahadsantahay! Waxaan u maleynayaa inaan qaadan doono koorsadaas xD, runtiina waad ku faraxsan tahay KZKG ^ Gaara hahaha taasi waa dabeecadda! ; D
Meel ka hooseysa waxay dhigayaan iskuxirka kaa tagaya, halkaas ayey sifiican ugu sharxayaan sida loogu wareejiyo MariaDB.
Illaa iyo hadda waxay ahayd gargaar in la haysto GnuTransfer, eber shilalka, eber waqti la'aan sababo aan la garanayn, dhammaan cajiibka 😀
Waan kugu hambalyeynayaa isbedelka martigelinta, runtii way u qalantay 🙂 Waxaan tixgelin siin doonaa GNUT gudbinta haddii maalin uun aan u baahdo.
Shakiga, su’aasha, fikradda, cabashada ama soo jeedinta ayaa ah: Maxay cadaabta ii iga tirtiraan dhulka dushiisa? mar kasta oo aan soo jeediyo adeegga https://www.digitalocean.com/, Haa, sida muuqata waxay leedahay qiimo jaban oo leh qalab dheeri ah (oo aan aheyn sida kuwa wax khiyaameeya ee aan kor ku soo sheegnay), anigu waxaan ahay isticmaale iyaga ka mid ah, si kastaba xaalku ha ahaadee, ii tusaalee muxuu yahay kala duwanaanshaha kaladuwaanta, waa maxay astaamaha ka dhigaya waxa quduuska ah grail waxaad samaynayso. labaduba cod dheer bay ku wacdiyaan.
Kumaa kaa tirtiray dhulka dushiisa Juan? Waxaad noo soo jeedisay talo, waan ku qanacnay oo waxaan go'aansanay inaan ku adkeysano gudbinta GNUT. Maxay ku kala duwan yihiin? Waxaan u maleynayaa in boostada ay waxbadan kahadleyso sababta aan u dooranay adeeg bixiyahan oo aan uguhelin mid kale. Aniguna waxaan kuu sheegi karaa in KZKG ^ Gaara uu gaabiyey markii uu ka hadlayey raggan iyo dareenka ay na siiyeen.
Su'aal isku mid ah… yaa ku tirtiray?
Farqiga u dhexeeya DigitalOcean iyo GnuTransfer fikradayda waa sahlan tahay: GnuTransfer wuxuu fiiro gaar ah noo siiyay in DigitalOcean aysan lahayn, mid fudud.
Ma dhahayo midka ayaa ka fiican kan kale, waxaan si fudud u sheegayaa in xilligan la joogo aanan u baddelaynin GnuTransfer adeeg bixiye kasta.
upps!, hubi faallooyinkii hore iyo sharaxaadda Manuel de la Fuente, ka xumahay, iyo bogaadin boga.
Kadib hawlgal baaris ah kadib, 100% hubi inay tahay xaruntan xogta. Marietta 55 ee Atlanta, GA.
iyo 70% oo ah mashiinada Tulix Systems, Inc.
Laakiin taasi mar dambe muhiimad badan ma lahan tan iyo markii isku xirka Xarunta Macluumaadka ay la mid tahay dhammaan shirkadaha martigeliya adeegeyaashooda.
19:30 gudaha Spain
13:30 gudaha Cuba
Oo mar haddii Xarunta Xogta la helo, waxaan siinaa bakoorad ka timaadda Spain shirkadaha 2 ee xaruntaas xogta u oggolaanaya natiijooyin isku mid ah dabcan.
Waxaan aaday inaan fiiriyo Cuba waxna majiraan… cidlo. Marka waxaan dejinayaa deegaanka:
Magaalada George: http://www.speedtest.net/my-result/2888999020
Hagaag waan hubaa inaan ka tagay wax badan oo intaa ka badan, laakiin waxaas oo dhan isla waqtigaas la wada qabtay, mid ayaa fikrad ka helayo kala duwanaanshaha weyn ee ka jira hal goob ilaa goob kale. La yaab ma la leedahay Colombia inay leeyihiin fiilo sir ah oo ay la leeyihiin Mareykanka? waxaa fiican inaanan dhibaato la kulmin. Heh heh
Marka la soo koobo, Marti-gelinta cusub ayaa qarxi doonta!
Qaybahan (Lima, Peru), waa xawaaraha aan ku socdo (mahadsanid, Malestar) >> http://www.speedtest.net/my-result/2889383625
joer, waan ka xumahay. ka dibna waxaan ka cabanaynaa inay qaali tahay oo gaabis tahay halkan. Immisa ayuu kugu xidhayaa isku xidhkaasi? .
Bal fiiri qiimayaasheyda isla server-kan: http://www.speedtest.net/my-result/2890325612
Way cadahay inay muhiim tahay inaad sifiican u hagaajiso bogga ...
Waa internet 1mbps ah, runtuna waa 30 doolar bishii (80 kali marka loo eego lacagta maxalliga ah). Intaas ayaan ku dhahayaa wax walba.
Digitalocean Waxaan arkay inay bixiso 4 mb / s upload upload ma aanan arkin, laakiin soo dejiso haddii aan caddeyn karo
Waxaan kugula talinayaa server4you.com
Waxaan haystaa server leh 8 koronto 16Gb oo wan, 2tb disk ah oo ku yaal raid1, fujitsu server, 50Mb symmetric, taageero 24 × 7 at 68 USD bishii. Adiga oo aan u baahnayn mashiin aad u badan oo leh VPS ama wax yar oo kuu gaar ah waxaad haysataa wax badan waxayna umuuqataa inay ka raqiisan yihiin gnutransfer.
Tan tan ka dib, wax dhibaato ah nama qabsan oo waxaad kala dooran kartaa disto iyo bixiyaha fiilada aad doorbideyso, taas oo ah, soo saarida laf-dhabarka.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sababta ay u isticmaaleen nginx, sidaan u fahmay, waxaan u soo bandhigayaa cillad xagga amniga ah markay isku dayayso inay la xiriirto php, maxaa yeelay waxay isticmaashaa barnaamij kale, waan ogahay inay ka fudud tahay apacheka xitaa waxaan u fikiraa si dhakhso leh, waxaan jeclaan lahaa si aad u ogaato sida ay tan u kiciyeen ugana shaqeeyeen 🙂
Waxaan rajeynayaa inaad iiga jawaabi karto